विजय कुमारको ‘औकात’, रविन्द्र मिश्रको राजनीति र ऋषि धमलाको पत्रकारिता
HOME » विजय कुमारको ‘औकात’, रविन्द्र मिश्रको राजनीति र ऋषि धमलाको पत्रकारिता
टेकनारायण भट्टराई , ७ कार्तिक २०७४
आफ्ना पछिल्ला टिभी अन्तरवार्तामा चर्चित पत्रकार विजय कुमार बारम्बार एउटा प्रशंग जोड्ने गर्छन्–‘समाजले आफ्नो औकात अनुसारको नेता छान्दछ।’
समाजको चेतनास्तर जस्तो छ प्रतिनिधित्व गर्ने नेता पनि त्यस्तै हुन्छन्। त्यसैले नेताप्रति गुनासो गरेर टाउको नदुखाउने विजय दाइको प्रष्ट तर्क छ। उनको प्रहार नेता छान्ने मतदाताप्रति बढी लक्षित छ।
स्वाभाविक हो– मत दिनेले होस नपुर्याए पछि चुनिने नेताको के दोष? मतदातालाई यिनै नेता मन परेपछि गर्नु के? विजय दाइले नै बारम्बार उच्चारण गर्ने एउटा हिन्दी कहावत छ– ‘गधी पे दिल आगया तो परी क्या चिज हे..।’
चुनाव, पार्टी र पात्र –
पटक पटक जनताबाट चुनिएर पनि माखो मार्न नसकेका पात्रहरुलाई के आश गरेर मतदाताले फेरि पनि भोट हाल्छन् भेउ पाउनै मुस्किल छ। सायद नयाँ छान्ने जोखिम लिन जनता तयार देखिँदैनन्। मतदातालाई लत नै बसेको छ–उही पुरानोमा मत घोप्ट्याउने। ‘ट्राइ नेक्सट’ हैन ‘ट्राइ अगेन’मा मतदाता अभ्यस्त छन्।
प्रसंग एकतर्फी पनि नहोस्। बिर्सन नहुने अर्को पाटो पनि छ। मतदाता त्यति स्थिर पनि छैनन्। कहिले राप्रपा ट्राइ गरे। कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी। मतदाता लहडमा पार्टी फेर्न खप्पिस छन्। विगतका चुनावी नतिजाले त्यो देखाएको छ। तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको मुख्य विषय ‘व्यक्ति छनौट’ को हो। पार्टी रोज्ने मामलामा ‘चुजी’ देखिएका मतदाता व्यक्ति रोज्ने मामलामा किन अल्छी बनेका होलान्?
कुनै पार्टी यस्तो छैन जसको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रमा गम्भीर खोट छ। व्यक्ति झिकेर हेर्ने हो भने पार्टी त एक स्थुल चिज मात्रै न हो। त्यसैले पार्टी भन्दा व्यक्ति प्रधान भएर मत हाल्ने परम्परा बस्यो भने स्थिति फेरिने धेरैको अपेक्षा छ। पार्टी सबै असल तर नेता खराव हुनुको दोष मतदाताले लिनै पर्छ। सायद विजय दाइको इसारा यसैमा लक्षित छ।
रविन्द्र मिश्र र ऋषि धमला–
धमलाको चित्राकृति दिमागमा लिनुस् उनको मोटामोटी छवी तपाँइको दिमागमा घुम्ने छ। त्यसैगरी मिश्रको लिनुस् उनको वेग्लै छवी छ।
चर्चित पत्रकार मिश्र छँदाखाँदाको बीबीसीको जागिर त्यागेर राजनीतिमा होमिएका छन्। धमला पत्रकारिताको आडमा पछिल्लो समय चर्को राजनीतिमा उत्रिएका छन्। वैकल्पिक धारको राजनीति अगाडि बढाउने उद्घोष गरेका मिश्र चल्तिका दलहरुसँग तालमेल गर्न इच्छुक देखिएनन्। धमला कहाँ ताक पर्छ त्यहाँबाट राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दौडमा छन्। पत्रकारिता जगतका चर्चित पात्र धमला किन राजनीतिमा उत्रिन खोजेका हुन् न उनले खुलाएका छन् न कसैले चासो राखेको छ।
समाजले आफ्नो औकात अनुसारको नेतृत्व छान्दछ। नेतृत्व प्रवृत्ति र क्षमताका हिसावले धमला एउटा औकातको प्रतिनिधित्व गर्छन्। पुराना दलभित्र धमला मार्काका धेरै उम्मेद्वार चुनावी दौडमा छन्। तिनै दलभित्र मिश्र मार्काका पनि उम्मेद्वार छन्। चुनाव आएको छ। समाजले औकात देखाउने समय हो यो।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ मिश्र र धमलाबीच तुलना गर्नु नै मुर्खत हो। तर यहाँ तुलना गर्न सान्दर्भिक छ। धमला एउटा प्रवृत्ति बनिसकेका छन्। सिंगो पत्रकारिता थामेको भ्रम पालेका धमलालाई राजनीति पनि मै थेग्न सक्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ। मिश्र नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोग भित्र्याउन उद्दत छन्। अब्बल युवा पंक्ति राजनीतिमा लाग्नु पर्छ र आफ्नै जीवन कालमा तीब्र विकास संभव छ भन्ने दृष्टान्त दिने उनको ध्येय छ।
धमला समाजको औकात आफू अनुकुल रहेको ठान्दछन्। त्यसैले उनको मनोबल र आकांक्षा कहिल्यै घटेको देखिँदैन। मिश्र समाजको औकात नै फेर्नु पर्छ भनेर जुटेका छन्। समाजको धारमा बग्ने धमलाका लागि यात्रा रोमाञ्चक छ। धार नै बदल्ने मिश्रको यात्रा जटिल छ।
फेरि पनि जोडौं– समाजले आफ्नो औकात अनुसारको नेतृत्व छान्दछ। नेतृत्व प्रवृत्ति र क्षमताका हिसावले धमला एउटा औकातको प्रतिनिधित्व गर्छन्। पुराना दलभित्र धमला मार्काका धेरै उम्मेद्वार चुनावी दौडमा छन्। तिनै दलभित्र मिश्र मार्काका पनि उम्मेद्वार छन्। चुनाव आएको छ। समाजले औकात देखाउने समय हो यो।
धमलाको राजनीतिक हमला–
धमलाको नेपाली पत्रकारिता र राजनीतिमा सोलोडोलो हालिमुहाली दर्शाउने पछिल्ला समाचार सार यहाँ प्रस्तुत छ, उनकै रिपोर्टस क्लबको वेवसाइटबाट।
‘ऋषि धमलालाई साझा उम्मेद्धवार बनाउन प्रयास गरिरहेका छौंः राजपा नेपाल’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ– राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले भने, ‘ऋषिजीजस्तो चर्चित फेस राजनीतिमा आउनुपर्छ, उहाँलाई चुनाव उठाउनेबारे अन्तिम प्रयास भएको छ।’
अर्को समाचार शीर्षक छ– ‘मधेशमा ऋषि धमला साझा उम्मेद्धवार बन्दै, कांग्रेसले टिकट दिए माओवादीले पनि सघाउने’
समाचारमा लेखिएको छ– धमलालाई प्रदेश २ को रौतहट क्षेत्र–४ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्धवार बनाउन प्रायः मुख्य दलहरु सहमत भएका छन्। मधेशमा धमलाको क्रेज देखेर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले नै उनलाई साझा उम्मेद्धवार बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। मधेशको विकासको लागि धमलाले मात्रै काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास र भरोसा मधेशी जनताको छ।
समाचारको एक अंश अझै लिनुस्–
सूत्रहरुले बताए अनुसार प्रचण्डले धमलालाई कांग्रेसले उम्मेद्धवार बनाए आफ्नो पार्टीले पनि सहयोग पुर्याउने संकेत गरेका छन्।
औकात र उत्साह–
धमला स्वयंले तयार पार्न लगाएका यी समाचार र उनको मनोबल देख्दा लाग्छ उनी चुनावमा टिकट पाउनु र जित्नु मेरै लागि तय छ भन्ने ठान्छन्। उनी मनमनमा गुन्दा हुन्– चुनाव जितेर आएकाहरुलाई दिनदैन्य क्लबमा बोलाएर उठबस गराउने क्षमताको मान्छे म, उनीहरु भन्दा के कम? उनीहरुले जित्ने चुनाव मैले नजित्नु पर्ने कारण के? धमलाको यो अत्मबलले चानचुने सन्देश बोकेको छैन। उनलाई गहिरो विश्वास छ यो समाजको नेता हुन लायक मै हुँ। यो समाजको औकात अनुसार नेता हुनु मेरो हक हो।
म अहिले नै विजय दाइको कित्तामा उभिन चाहन्छु। चुनावमा टिकट पाएर धमलालाई मतदाताले जिताए भने मलाई पनि टाउको देखाउनु छैन। आफ्नो औकता अनुसार मतदाताले नेतृत्व छाने। बस। खत्तम।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका रविन्द्र मिश्र धमला जस्तो उत्साही छैनन्। उनको चुनावी घोषणा पत्र समाजको औकात तौलेर तयार पारिएको छ। घोषणा पत्रमा जनमतको अपेक्षा समाजको गति सुहाउँदो छ– ‘यो पटक राष्ट्रिय पार्टी, अर्को पटक देशको नेतृत्व।’
विवेकशील साझा पार्टीलाई यो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन मात्रै पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ। तर गठबन्धनका नाममा उनीहरुले आफ्नो वैकल्पिक धारको संकल्पलाई लत्याएनन्।
पात्र राम्रो भएपनि दलीय हैसियत मजबुत नहुँदा मतदातालाई प्रभावित पार्न नसकिने यथार्थलाई मिश्रले स्वीकारेका छन्। अर्को पटक राष्ट्रिय पार्टी हुने अपेक्षा नाजायज छैन। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य पछि माओवादी चुनावमा सहभागी भएको पहिलो खेपमै नेतृत्वमा आएको थियो। पार्टी जिताउन जनता खप्प्सि छन्। तर मत हाल्ने बेलामा मिश्र र धमला प्रवृत्तिबीचको भेद कहिले खुट्याउने होलान्? विजय कुमारले आफ्नो चर्चित टिभी शो मा ‘समाजको औकात बदलियो त्यसैले नेता पनि बदलिए’ भन्ने दिन आउला?